Posted by Ree Noe Mann at 8:15:00 PM
မက်မက်ကလဲ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာ မထင်မှတ်ဘဲ စုပေါင်းဒါန ပြုလုပ်ခွင့်ရရှိတာရယ် ၊ ပျော်ရွှင်စရာနေ့လေးမှာ
စင်္ကာပူမှ မောင်နှမများကို စုစုစည်းစည်း
တွေ့ဆုံခွင့် ရရှိတဲ့အတွက် ဖော်မပြနိုင်အောင် ၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်မိပါတယ်။
ကိုရီနိုရေ အခုမှ ခရီးက ပြန်ရောက်လာချင်း အကို့ဘလော့ကို အရင်ဆုံးဖွင့်ပြီး ဖတ်မိတယ် အလှူကုသိုလ်အတွက် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓုခေါ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အားလုံး စုပေါင်းပြီး တပျော်တပါးလှူတာကို မြင်မိတော့ ၀မ်းသာကြည်နူးမိတယ်။ မလာနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အခုလို တင်ပေးတဲ့ ပို့စ်ကနေပဲ ဖတ်ပြီး စိတ်ထဲမှာ တကယ်သွားခဲ့ရသလို ခံစားမိပါတယ်။ ဒီ့ထက်မက နောက်နှစ်တွေမှာလည်း ဆက်လက် လှူဒါန်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း....
သာဓု သာဓု သာဓုပါ...ရီနိုရေ.......:D
ဒီနှစ် Blogger မောင်နှမတွေအလှူမှာ မပါဝင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် နောင်နှစ်တွေမှာ ပါဝင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ့မယ်ဗျာ။ အခုအလှူကိုလဲ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ သာဓုခေါ်ပါတယ်။ blogger မောင်နှမတွေနဲ့ ဆုံတွေ့ခွင့်ရခဲ့တာကိုပဲ ဝမ်းသာနေပါတယ်။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ...။
နောင်နှစ်မှာလည်း ဒီလိုပဲ မောင်နှမတွေစုပေါင်း
ပြီး အလှူတွေ ထပ်လုပ်နိုင်ကြပါစေ.
ပျော်စရာလည်းကောင်း ကုသိုလ်ရတဲ့ အလှူလေး တစ်ခု အောင်မြင်သွားတာ မြင်ရလို့ ၀မ်းသာပါတယ် ကိုရီနိုရေ..။
သာဓု (၃)ကြိမ် ခေါ်ဆိုသွားပါတယ်ရှင်။
အယ်...ကိုရီနိုလဲ ဘုန်းဘုန်းတို့ ဝိုင်း အကျစားတာကို မနာလိုဘူးပေါ့...
အင်းးးးးး ဒွတ်ခပဲ... နောက်ဆို သံခမောက်ဆောင်းရတော့မယ်... ဝမ်းနဲလိုက်ထှာနော်...
ကျော်ကြားတော့လဲ မနာလိုသူတွေပေါ.......ထာကို.. တတ်နိုင်ဘူး
ကိုရီနို ကျွန်တော်လည်း ဘုန်းကြီးဝိုင်း အကျမစားရဘူး..
စားကြတဲ့ သူတွေကို မနာလိုဘူး ..အဟီး
အလှူအတွက် ၀မ်းမြောက်ပီတိဖြစ်မိတယ် အစ်ကိုရေ...
စီစဉ်ပေးကြတဲ့ သူတွေကို တကယ်ကျေးဇူးပါ...
anyway... ပုံတွေတင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ခုက ခွင့်နှစ်လ ကလည်း ပြည့်ပြီ ထပ်ယူလို့ ကလည်းမရ နဲ့ 
တစ်ခု လိုချင်တော့လည်း တစ်ခု တော့စွန့် လွတ်ရမှာပါပဲလေ
ပုံလေးတွေ ကြည့်ပြီး ကြည်နူးရပါတယ် ဗျာ
ကိုရီနိုတို့ အပျော်လေးတွေ ကူးစက်သလို ခံစားရပါတယ်
ပျော်ရွှင် ကြည်နူးစရာ အလှုကို တွေ့ ရ မြင်ရတာ
တကယ်ပီတိ ဖြစ်မိပါတယ် အစ်ကိုရေ . . . :)
သာဓု ပါ ငယ်ရေ
ရေခြားမြေခြား မှာ ဒီလိုပွဲမျိုးလေး ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့နိုင်ကြတာ ချီးကျူးပါတယ်
ပုံတွေကြည့်ပြီး ကိုယ်တိုင်မရောက်ပေမဲ့ ပျော်သွားတယ်။
အဲ..ဘုန်းကြီးပွဲအကျကို မစားရလို့ စိတ်မကောင်းကြီးစွာနဲ့ ရိုက်ထားတာလား ???
အဲဒီနေ့တုန်းက ပျော်တပြုံးပြုံး မိုးသို့ချုန်းနေတာပဲ။ ဒါမျိုးပွဲလေးတွေ ခဏခဏ ရှိချင်လိုက်တာ။
ဟိုနေ့ညက တိတ်တိတ်လေး ပြန်သွားတယ်ဗျ မနက်အစောလည်း အလုပ်ရှိနေတာနဲ့ နှုတ်ဆက်ရမှာ အားနာလို့ရယ် ထွက်ပြေးသွားတယ်ဗျ :P
အမှတ်တရလည်ဖြစ် ကုသိုလ်လည်းရသမို့ ပျော်စရာကြီးပဲ...
ဘုန်းကြီးပွဲစားချင်ရင် အခုနေ ဘုန်းကြီးဝတ်လို့ မီပါသေးတယ် ရီနိုရေ...း)
စေတနာထားဧည့်ခံပေးတဲ့ ကိုရီနိုကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အတိုင်းမသိပျော်ရွှင်မိပါတယ်.။ နှစ်ရက်လောက် ဖျားသွားတာက လွဲလို့ပေါ့ :( ၊
ဓါတ်ပုံတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. အစ်ကိုရီနိုရေ။
ပျော်စရာကောင်းပြီး ကုသိုလ်လည်းရ ..
ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ရပါတယ် ကိုရီနို ၊ အခုလိုမျိုးဘလော့ခ်ဂါ မောင်နှမတွေနဲ့ ဆုံတွေ့ခွင့်ရခဲ့ပြီလေ ပြီးတော့ကျွန်တော့်ကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ တဲ့ မက်မက်နဲ့ ရာတမေ တို့ကိုလည်းကျေးဇူး တင်ပါတယ် သူတို့တွေ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့လို့လဲ ဒီအလှူမှာပါဝင်ခွင့် ရခဲ့တာပါ နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုး ထပ်ပြီးတော့ဆုံချင်ပါသေးတယ်
ဘုန်းကြီးဆွမ်းဘုန်းနေတုန်းက ဘေးမှာ ဝေရာဝိစ္စလုပ်ပေးတုန်းတော့ ဘယ်သူမှ လာမရိုက်ဘူး
လူများလာလို့ ထောပတ်ထမင်းပြင်တော့ ဘုန်းကြီးဝိုင်းကို ဝိုင်းတီးလိုက်ကြတယ်
ခုလိုအလှူလေး ဖြစ်မြောက်အောင် လုပ်ခွင့်ရလိုက်တာ တကယ် ကြည်နူးစရာပါ ရီနိုရေ..
စကားမစပ် ဖန်သကြိုးက ဓါတ်ပုံထဲ တအားပါချင်တာကိုး၊ ဂလိုမှန်းသိရိုက်ပေးတာပ၊ ဘုန်းကြီးဝိုင်းတီးနေတဲ့ အချိန်က လူတွေရှင်းမှပါဟ